कोरोनाको दोस्रो लहर यति घातक हुनुको कारण ! « Khoj Raftar
कोरोनाको दोस्रो लहर यति घातक हुनुको कारण !
१ जेठ,काठमाडौं– कोरोनाको दोस्रो लहरको बारेमा विभिन्न सर्वेक्षण र अध्ययनहरु भइरहेका छन् । भारतको वाराणासीस्थित काशी हिन्दू विश्वविधालय (बीएचयू) को जन्तु विज्ञानका जीन वैज्ञानिकहरुले यसका दोस्रो लहर यति धेरै भयानक हुनु कारण पनि पत्ता लगाएका छन् । वैज्ञानिकहरुले हर्ड इम्यूनिटी अथवा एन्टीबडि छिट्टै समाप्त हुनुलाई यसको कारण बताएका छन् ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार एन्टीबडी ६ महिनासम्म यथावत रहन्छ भनेका थिए तर यो तीन महिनामा नै सकिएको छ । जसले गर्दा कोरोनाविरुद्ध शरीरमा बनेको हार्ड इम्यूनिटी अथवा एन्टीबडी विकसित भएर पनि दोस्रो लहर धेरै घातक प्रमाणित भएको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहर घातक हुने सम्बन्धलाई सोझै इम्यूनिटी अथवा एन्टीबडीसंग जोडेर अध्ययन गर्ने बीएचयूका जन्तु विज्ञानका प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबेले वाराणसी सहित कुल १४ जिल्लामा अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबरसम्म एन्टीबडी टेस्ट गरिएको थियो ।
उक्त परीक्षण स्ट्रीट भेन्डर्सको गरिएको थियो । धेरै एक्सपोज्ड मानिसमा कुन स्तरको इम्यूनिटी बनेको छ भन्ने थाहा पाउनका लागि उक्त अध्ययन गरिएको थियो ।
उनका अनुसार औसत २५–३० प्रतिशत मानिसमा एन्टीबडी बनेको पाइयो ।
जसमा वाराणसी अथवा पूर्वान्चलमा करिव ४० प्रतिशतमा कोरानो विरुद्धको इम्यूनिटी बनिसकेको थियो ।
विश्वमा भएका विभिन्न सर्वेक्षणमा कोरोना विरुद्ध शरीरमा बन्ने एन्टीबडि शरीरमा ६ महिनासम्मका लागि रहन्छ भन्ने देखिएको छ ।
यस्तै अध्ययन आईसीएमआरले पनि गरेको थियो ।
जसको नतिजा करिव एकै प्रकारको निस्केको थियो ।
यहि आधारमा अघिल्लो ६ महिनासम्म मानिसको शरीरमा एन्टीबडी समावेश रहन्छ र कम्तिमा त्यो समयसम्म दोस्रा लहर आउँदैन भनिएको थियो ।
यहि क्रमा धेरै मानिसले खोप लगाइसकेका हुनेछन् भन्ने मान्यता थियो तर भयो त्यसको विपरित ।
मानिसमा एन्टीबडी सकिसकेको थियो
वाराणसीका ती एक सय जना मानिसमा पुनस् अध्ययन गरियो, जसको एन्टीबडी बनिसकेको थियो ।
उनीहरुको पुनस् एन्टीबडी परीक्षण गर्दा तीमध्ये ९३ जनाको एन्टीबडी सकिसकेको थियो ।
त्यसपछि मानिसहरु भित्र बनेको इम्यूनिटी वाल ध्वस्त भइसकेको थाहा भयो ।
त्यसबीच पछिल्लो पटक ६० देखि ७० त्यस्ता मानिस, जो संक्रमणले ग्रसित थिएनन्, उनीहरु पनि यो पटक संक्रमित हुन थाले ।
यसको कारण कोरोनाको भयानाक स्थिति उत्पन्न हुँदै थियो र लकडाउन पनि हटाइएको थियो ।
मापडण्दको पालना नहुनु
वैज्ञानिकहरुका अनुसार दोस्रो लहरको समय इम्यूनिटी वाल ध्वस्त भइसकेको थियो र सबैले मापदण्डलाई पालना गर्न पनि बन्द गरिदिएका थिए ।
३–४ महिनामै एन्टीबडी कसरी सकियो भन्ने बारेमा अहिले केही थाहा भएको छैन ।
त्यतिबेला धेरै मानिसहरु बिना लक्षणको भएको हुन सक्ने सम्भावना थियो ।
पहिलो लहरमा त मानिसको शरीरमा बनेको एन्टीबडीको मात्रा कम थियो र त्यो छिट्टो समाप्त भएको धेरै सम्भावना थियो ।
त्यसैका कारण दोस्रो लहरको भयानक विध्वंशको सामना गर्नु परेको हो ।। कलाकर्मीबाट